ကရင်​မ​တွေ အ​ကြောင်း ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကရင်​မ​တွေ အ​ကြောင်း ၁	9
ကရင်​မ​တွေ အ​ကြောင်း ၁
Posted by ムラカミ on Mar 22, 2015 in Creative Writing, Members, My Dear Diary |9comments
အရင်​က ကရင်​မတ​ယောက်​ ရှိဖူးရဲ့
လီဂျန်​ဒရီ မိမိဂီ ကိုမရို​သေ​သော ​တျောက်​ ဆိုပါ​တော့
တရုံးလုံးမှာ ဆရာလိုက်​လုပ်​​နေသမျှ ကျ​နော်​အားသမျှ သူ့အသင်းမှာ တဗိ့ ခံပီး သူတို့ ဆီ စာသင်​ခဲ့တာရယ်​
အာ့​ကြောင့်​ သူက ကျုပ်​ကိုမရို​သေ၀ူး
ခုထိ ဘယ်​သူမှ မ​ခေါ်ရဲတဲ့ နာမည်​​ပြောင်​ကို​ခေါ်တုန်း
(မိညီမ ​အော့​ကျောလန်​တဲ့ထဲက ထိပ်​တန်းစာရင်းဝင်​​ပေါ့)
ကျိကျိနဲ့ ကြိုက်​​နေတုန်း​တောင်​ အမြဲ စကား​ပြော​ပေးခဲ့သူ
သူ မိဘသ​ဘောတူသူကို ​ခေါင်းငြိမ့်​လိုက်​ပါတယ်​
သူလည်းမင်္ဂလာမ​ဆောင်​ရ​သေးတဲ့ ကာလတ​လျောက်​လုံး ဆိုပါ​တော့
ကျ​နော်​ ​ဘောလုံးပွဲကြိုက်​တာ သူသိတယ်​​လေ
ဟန်​နီ တဲ့ ဘယ်​ပွဲ ဘယ်​ဘက်​က​လောင်းပါ နိုင်​ရင်​ နင်​ ငါ့လာခိုးဖို့ ဆီဖိုးရပြီ​လေ တဲ့
သူ​လောင်းဖို့​ပြောခဲ့သမျှ အ​တော်​များများ မှန်​တတ်​ခဲ့ပါတယ်​
ဒါ​ပေမယ့်​ ကျ​နော်​ မ​လောင်းခဲ့
တခါမှ ချစ်​ပါတယ်​လို့မ​ပြောဖူးသလို ချစ်​ပါလို့ မ​တောင်းဆိုဖူးဘူး
ကျုပ်​လိုပဲ မျက်​နှာရှည်​ရှည်​ ​မေးချွန်​ချွန်​နဲ့ ဆိုပါ​တော့
သည်​​နေ့အထိ ကျ​နော်​ အလုပ်​များလို့ အွန်​လိုင်းမှာ​ပျောက်​​နေရင်​ ​မေး​နေတုန်းရယ်​
အ​စောကတည်းက ငတိ​တွေက လက်​​လျော့ထားတဲ့ အဆိပ်​ပြင်းတဲ့ ချာတိတ်​မ
​ကျော့်​ကိုလည်း သတိ​ပေးထားကြတယ်​ အစ်​ကို သူက ဘာလာလာ​ဒေါင်းတယ်​​ရော်​ဆိုပိီး
ခက်​စ်​တာက ​ကျော်​က မ​ဒေါင်းရ​သေး
I’m gonna miss u တဲ့ ငိငိ
ငဂွင်​ထဲ ၀င်​ပဟဲ့ ဆိုပြီး သူကမ်း​ပေးလာတဲ့် လက်​ဖ၀ါး​လေးကို ဆုပ်​ကိုင်​ရင်း
My god, your face i’m gonna miss လို့ ​ပြောလိုက်​မိပါရဲ့
ဒါ​တွေဖတ်​မိရင်​ သိပ်​သိပ်​​ဒေါသထွက်​မယ့်​ ကရင်​မ ​နောက်​​တျောက်​ရှိ​သေးတယ်​ဆိုတာ​တော့ မ​ပြော​လော့ဘာဘု
≥Ö‿Ö≤(>‿◠)✌(͡° ͜ʖ ͡
မြစပဲရိုး says: lol:-)))))) အေးဟေ့။ ပြော ပြော မင်းဘဲ ပြော။
အများ နဲ့ တစ်ယောက်။
ကျုပ် တူ လေး မလွန်ဘူး။
အများ သူ တွေ အလွန်။ BTW …
မင်းကလဲ သူများ ခလုပ်တိုက်နိုင်မဲ့ နေရာမှာ စင်းစင်းကြီး လှဲ နေရော့သလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: ကရင်မလေးတွေ ဘယ်လို မုန်းစရာကောင်းသလဲ
ဘယ်လို ချစ်စရာကောင်းလဲ သိချင်လို့
ဒီနှစ်သင်္ကြန်တွင်းလည်း သံလွင်မြစ်ကမ်းဘေးက ပိုးကရင်ရွာလေးဆီ သွား နေပါဦးမယ်လေ
အူးစည် says: ကြောင်ကြီးပြောဖူးတယ်.. ကရင်မလေးတွေ ရေလည်ကိတ်ဆိုပဲ..။
ပအို့စ်မလေး နန်းလေးရဲ့ ကိုးရီးယားပွဲတုန်း နဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားတာကို
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးဆို ဆရာဖားတို့လောက် သဘာမရင့်တော့
စာတွေ့ပဲ ကြည့်နေရဒါပါ။။။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ကရင်ပြည်နယ် ကို အဲလေ…. ကရင်မဒွေကို လက်နက်ကိုင်စွဲတော်လှန်အေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဒို့တာဝန်​ အ​ရေးသုံးပါးကို​တော့ ထိပါး​နေပီ ။ တိုင်းယင်းသား စီးလုန်းငြီငြွတ်​မှု မပျိုဂွဲ​ယေး ……. ဒို့အ​ယေး
တဲ့ ကယင်​မေ ရး​ဒွေဂို မ​ဆော့ဂါးဘာနဲ့ ။။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 486
Swal Taw Ywet says: ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံးလေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲသူတွေကိုမှ စီးရီးထုတ်မလို့ကိုးးးး။
ဥကြောင်ပြောတဲ့ သဗုန်မတွေတော့ ဝါးနှီးဖြာနေလောက်ပီ။
Mike says: .ကရင်မဒွေမုန်းနေရင် အင်းစိန်တောင်သူကုန်းသွားနေပီး ကရင်ဆော်ဒါသောက်ပါလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကရင်မလေးက ကိုယ့်ကို ( အား ကို ၊ အား ကို ) နဲ့ ခေါ်လိုက်ရင်
ရင်ထဲမှာ ထော်လာဂျီ ၁၀ စီး ဖြတ်မောင်းသွားသလိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ကချင်